ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာလို့ ချောကလက်ပေးကြတာလဲ??? | The Restaurant Guides for Myanmar
ချစ်သူများ​နေ့မှာ လူတွေက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ဘာကြောင့် ချောကလက် လက်ဆောင် ပေးကြတာလဲ?? ချစ်သူများ​နေ့မှာ ချောကလက်လက်ဆောင် ပေးရတဲ့ ဓလေ့က ဘယ်အချိန်ကတည်းက ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်တည်လာခဲ့တာလဲ??
ချစ်သူများနေနဲ့ ချောကလက်ရဲ့ ဆက်နွယ်မှုကို မပြောခင်မှာ ချောကလက်ဆိုတာ အချစ်ကိုဖော်ပြဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ချောကလတ်ဟာ ရိုမန်တစ်ဆန်သော စိတ်ကျေနပ်စေသော ထူးခြားသော စတဲ့ခံစားချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
၁၈ရာစုလောက်မှာ အင်္ဂလန်သား Richard Cadbury ဆိုသူနဲ့ သူ့မိသားစုက ချောကလက်ကို စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုခေတ်အခါတုန်းက ချောကလက်သည် အလွန်စျေးကြီးပြီး အထက်တန်းလွှာလူတန်းစားတွေကသာ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
Cadbury က စီးပွားရေး ချဲ့ထွင်တဲ့​အနေနဲ့ နှင်းဆီအနီတွေနဲ့ အလှဆင်ထားသော ချောကလက်box တွေကိုပါ ထပ်ပြီးဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ Cadbury ရဲ့ လှပစွာဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ချောကလက် Box နဲ့ ချောကလက်တွေဟာ ၁၉ရာစုတွင် လူသိများ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Cadbury ဟာ အသည်းပုံပုံစံ ချောကလက်box ကို ပထမဦးဆုံး တီထွင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူများနေ့ဆိုပြီး လူငယ်တွေကြား စတင်ခေတ်စားလာခဲ့တဲ့ (၁၉) ရာစုနှစ်မှာ အမေရိကန် ချောကလက် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Milton Hershey ဆိုသူက ၁၉၀၇ ခုနှစ်မှာ "kisses" အမည်နဲ့ ချောကလက်တွေကို ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ချောကလက် လုပ်ငန်းရှင် Russell Stover ဆိုသူကမှ ချောကလက်နှင့်အချစ်ကြားက ဆက်နွယ်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် သူမရဲ့အမျိုးသားနှင့်အတူ အသည်းပုံပုံစံ ထုတ်ပိုးထားသော ချောကလက်တွေကို စတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့သည် အမဲရောင်ဇာနှင့် ဖဲကြိုးတွေဖြင့် အလှဆင်ထားသော အသည်းပုံချောကလက်boxထဲတွင် ချောကလက်တွေထည့်၍ "Secret Lace Heart" ဟု အမည်ပေး၍ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တီထွင်ကြံဆမှုကြောင့် "Secret Lace Heart" ဟာ လူငယ်ချစ်သူတွေကြား ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်ကာလတွေ ပြောင်းလဲလာပေမယ့် ယနေ့အချိန်ထိ မပြောင်းလဲသေးတာကတော့ ချစ်သူများနေ့မှာ ချောကလက်ကို လက်ဆောင်အ​​ဖြစ်ပေးနေကြတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်ခြင်းလက်ဆောင်အဖြစ် ချောကလက်ကို ဘာကြောင့်ပေးရတာလဲ? ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်တွေရှိနေလို့လဲ?
ပထမအချက်ကတော့ ချောကလက်ဟာ ချစ်စိတ်တွေကို ပိုတိုးလာစေနိုင်တဲ့ အစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်း လေ့လာချက်တွေအရ ချောကလက်စားထားသောသူဟာ မစားထားသောသူထက် ရိုမန်တစ်ဆန်သော အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ပို၍စိတ်ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ဖို့စိတ် အလွယ်တကူ ဖြစ်စေနိုင်သော စိတ်ကြွဆေးတစ်မျိုးလို့လည်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ဆိုပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ချောကလက်ဟာ "Theobroma Cocoa" လို့သိထားကြသော ကိုးကိုးပင်မှ ရရှိသော အစာဖြစ်ပါတယ်။ "Theobroma Cocoa" သည် ဂရိလူမျိုးများရဲ့ အဆိုအရ "Food For Gods" ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ချောကလက်ဟာ ပေးတဲ့သူရော အပေးခံရတဲ့သူအတွက်ရော ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ ချောကလက်ဟာ လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်အပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ချောကလက်ပေးတယ်ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့စစ်မှန်သော ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ချစ်ခြင်းတွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ အသနားခံမှုတွေ၊ အေးချမ်းမှုတွေကို တစ်ဖက်လူ ခံစားသိမြင်စေလိုတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ချောကလက်ဟာ ချစ်ခြင်းသင်္ကေတ ဖြစ်တာမလို့ ချစ်သူတွေမှမဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း၊ မိသားစုအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ပေးလို့ရတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
စတုတ္ထအချက်ကတော့ ချောကလက် အထူးသဖြင့် Darkချောကလက်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါတယ်။ Darkချောကလက်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တစ်ချို့ဟာ ကင်ဆာရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။ ကျန်မားရေအတွက်ဘဲ ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ အသားအရေကိုလည်း စိုပြေလှပစေပါတယ်။ စိတ်ညစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ချောကလက်စားပေးရတယ်လို့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ကြားဖူးမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ချောကလက်ဟာ စိတ်ပျိုကိုယ်နုစေပါတယ်။ အချစ်ကို ဖော်ပြဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ရုံသာမက နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပေမယ့် ချောကလက်ကို နေ့တိုင်းစားဖို့တော့ မသင့်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံး အစားအစာဖြစ်လို့ပါ။ ချောကလက်ကို မကြိုက်တဲ့သူ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းကိုရှားပါတယ်။ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင် လက်​ဆောင်ပေးသူရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်​​ခြင်းမေတ္တာအား အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ လက်ခံယူထားသင့်ပါတယ်။ FA လေးတွေလည်း ကိုယ့်ရဲ့ Crush နဲ့ အောင်မြင်ကြပါစေ။